Ifulethi elitofotofo elinephuli eBucharest - I-Airbnb
Ifulethi elitofotofo elinephuli eBucharest
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDragos Gabriel
Ndingathanda ukukwamkela kwigumbi lam elitofotofo. Yeyona ndawo ifanelekileyo yohambo olufutshane oluya eBucharest kunye neholide ende njengoko ndiyibonelele ngayo nantoni na onokuyidinga ukuze wenze ukuhlala kwakho kugqibelele, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Indlu ibanzi kwaye ifakwe kakuhle, inemibala eyonwabileyo ukukunika ivibe elungileyo. Kukho iWifi enesantya esiphezulu sasimahla kulo lonke igumbi kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Le ndawo yakhiwe ukusuka ekhitshini elinendawo evulekileyo enegumbi elikhulu lokuhlala elikhulu, iholo enye encinci edibanisa amagumbi, igumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela kunye neterrace encinci kodwa entle. Kwikhitshi lethu elityheli uya kufumana zonke izixhobo ozifunayo: iipani, iimbiza zokupheka, iiglasi, iiglasi zewayini, iikomityi, isomisi sesitya, iitawuli, isitovu, kunye nezinye izinto ezininzi ukuze ungaphoswa nto. Igumbi lokuhlala linebhedi yesikhumba, itafile enye yokutyela enezitulo ezithathu, itafile encinci yekofu, ifanitshala yegumbi lokuhlala elula kunye nescreen esikhulu seTV esineflethi, enentambo enazo zonke iinkqubo ezivela eRomania, kodwa ndicinga ukuba ungazifumana ezinye zazo. kubo ngesiNgesi kwakhona njengeDiscovery njl. Kwiholo encinci uya kufumana i-closet enkulu efihla umatshini wokuhlamba, i-vacuum cleaner, kunye nazo zonke iintlobo zezisombululo zokucoca kunye needrowa uya kufumana iitawuli, i-hair dryer, i-slippers kunye nokunye. izinto.
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngebhafu eshushu kwaye hayi ikhabhu yeshawa kwaye uya kufumana kuyo iijeli zeshawa kunye neeshampu kuthi. Igumbi lokulala lilula kodwa linikwe incasa elungileyo ngoko linebhedi enkulu yokumkani, igumbi elinye elikhulu kunye nelinye elincinci. Ndiqinisekile ukuba uya kuthanda i-shades eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe eya kwenza ukuba uthande imbonakalo yendawo enkulu enikwe ngabo. Ithafa yam encinci kodwa efakwe kakuhle iya kutsala amehlo akho kwaye iya kukunika ivibe entle, ngakumbi ngorhatya xa unethamsanqa uzakubona ukutshona kwelanga okumangalisayo kuyo. Unokufumana isidlo sakusasa apho okanye usele iglasi yewayini kwaye uphumle.
4.73 · Izimvo eziyi-60
Igama lendawo yokuhlala yiCosmopolis, ekumantla eBucharest, i-15 min kude nesikhululo seenqwelomoya. Ilungile kuhambo lweshishini, indawo yeshishini lasePipera yimizuzu nje eli-15 ngemoto. Indawo entsha kwaye ixhotyiswe kakuhle ngezixhobo ezininzi: kukho amachibi ama-6 abekwe kuyo yonke indawo yekhompleksi, kukho iimitha ezingama-20 kude nendlu yam, kukwakho kufutshane nendawo yokuthenga, apho uya kufumana ivenkile enkulu. ICarrefour, ikhemesti, ukuthunga, ukutya okukhawulezayo, i-ATM, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokutyela, kunye neendawo ezintle zokusela apho unokusela ii-cocktails ezilungileyo, ngoko ke yonke into onokuyidinga. Le ndawo entsonkothileyo inenkundla yentenetya ke ngoko ukuba ungumntu othanda intenetya, unendawo yokudlala, ijimu enezixhobo ezifanelekileyo, iindawo ezininzi zokudlala zabantwana kunye neendawo eziluhlaza ngakumbi apho unokuhamba khona. Ndicebisa indawo yokutyela ekufutshane nephuli enye, egama linguFine, apho unokusela okanye utye into yesintu, bapheka izitya ezimnandi kakhulu kwaye banencasa kwaye banendawo entle ngokuhlwa. Awunakuphoswa lulwandle olunesanti, olukufuphi nechibi, apho unokuphumla kwaye ube nombono omangalisayo wendalo. Kuvumelekile nokuba ulobe apho, ke zama ithamsanqa lakho.
I-complex ikhuselwe kakuhle yi-BGS, nasemnyangweni, akukho mntu unokufikelela kwi-complex ukuba angabasemzini kwi-complex. Abafana abavela emnyango baya kuvumela ukufikelela kuphela ukuba abanini bashiya amagama abantu abaza kutyelela.
Umbuki zindwendwe ngu- Dragos Gabriel
Ndiza kuba semandleni akho kuyo nayiphi na imibuzo, okanye imeko enokuthi yenzeke. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam nanini na.